တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများသည် ဘေးကင်း၍ အစွမ်းထက်မှုရှိသည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း လာအိုဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား - Xinhua News Agency
လာအိုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(LPRP) ဗဟိုကော်မတီ ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Kikeo Khaykhamphithoune က လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့၌ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သော အခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဗီယင်ကျန်း ၊ ဇွန် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ထိုးနှံရေးအတွက် စီစဉ်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးများသည် ဘေးကင်း၍ အစွမ်းထက်မှုရှိသည်မှာ အလုံးစုံထင်ရှားကြောင်း လာအိုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(LPRP) ဗဟိုကော်မတီ ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Kikeo Khaykhamphithoune က ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရက လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စတုတ္ထသုတ်အတွက် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို လာအိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ လာအိုနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က လာအိုနိုင်ငံသည် ကပ်ရောဂါ လှိုင်းသစ် ဖြစ်ပွားသည့် အရေးကြီးသော အချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံက အချိန်မီ ကူညီမှုများအား ထပ်မံ၍ ပြုလုပ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးအကူအညီ အသုတ်သစ်အား ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း ၊ ယင်းမှာ လာအိုနိုင်ငံ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အဖိုးတန်ပြီး ကြီးမားသော အထောက်အပံ့ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ Wattay အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား အလုပ်သမားများက သယ်ဆောင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အခမဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရေး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လာအိုနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ လာအိုရှိ တရုတ်လူမျိုးများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအတွက် လာအိုနိုင်ငံဘက်က အလွန် အလေးထားကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Jiang Zaidong နှင့် လာအိုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(LPRP) ဗဟိုကော်မတီ ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Kikeo Khaykhamphithoune တို့ တက်ရောက်ခဲ့သော ဇွန် ၁၅ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သော အခမ်းအနားအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Jiang Zaidong က လာအိုနိုင်ငံတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသော လူဦးရေ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသော ကာကွယ်ဆေးများကို ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြောင်း ကာကွယ်ဆေးများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ကာကွယ်ဆေး အသုတ်သစ်က လာအိုနိုင်ငံရှိ ကာကွယ်ဆေး လိုအပ်ချက်ကို ချက်ချင်းထိရောက်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး လာအိုပြည်သူများရဲ့ ကပ်ရောဂါအပေါ် အောင်ပွဲများ ရရှိလာမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုများ ဖြစ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။”ဟု သံအမတ်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရက လှူဒါန်းသော Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အသုတ်သစ်သည် လာအိုနိုင်ငံ မြို့တော် ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ Wattay အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
VIENTIANE, June 15 (Xinhua) — Laos has arranged for the administering of China’s COVID-19 vaccines nationwide, which have fully proved their safety and efficacy, Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) central committee politburo member, Deputy Prime Minister and Chairman of the National Taskforce Committee for COVID-19 Prevention and Control Kikeo Khaykhamphithoune said.
Jiang Zaidong, the Chinese ambassador to Laos, said in his speech at the ceremony that he was informed that 85 percent of Lao’s vaccinated population were administered with China’s donated vaccines.
“We believe that the new batch of vaccines will promptly and effectively fill the vaccine gap in Laos and make positive contribution to the Lao people’s coming victory over the epidemic,” said the Chinese ambassador.
1.Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) central committee politburo member, Deputy Prime Minister and Chairman of the National Taskforce Committee for COVID-19 Prevention and Control Kikeo Khaykhamphithoune speaks during the handover ceremony of China-donated COVID-19 vaccines in Vientiane, Laos, on June 15, 2021. A batch of Chinese government-donated Sinopharm COVID-19 vaccines arrived at Wattay International Airport in Laos on Monday withahandover ceremony held upon their arrival. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
2.Workers unload China-donated COVID-19 vaccines fromaChinese cargo plane in Vientiane, Laos, on June 14, 2021. A batch of Chinese government-donated Sinopharm COVID-19 vaccines arrived at Wattay International Airport in Laos on Monday withahandover ceremony held upon their arrival. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
3.Chinese ambassador to Laos Jiang Zaidong (R) and Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) central committee politburo member, Deputy Prime Minister and Chairman of the National Taskforce Committee for COVID-19 Prevention and Control Kikeo Khaykhamphithoune attend the handover ceremony of China-donated COVID-19 vaccines in Vientiane, Laos, on June 15, 2021. A batch of Chinese government-donated Sinopharm COVID-19 vaccines arrived at Wattay International Airport in Laos on Monday withahandover ceremony held upon their arrival. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)